နှဈခြို့ကျောဖီ: March 2010
တချို့တွေက ပြတ်ရွေ့ကြောများလိုအုပ်စုဖွဲ့ မိုက်ကြေးခွဲလို့
တချို့တွေက တွန့်ခေါက်တောင်တန်းတွေအဖြစ်အုပ်စုဖွဲ့ တောင်းရမ်းစားသောက်လို့
တချို့တွေက လျှိုမြောင်ချိုင့်ဝှမ်းလို အရူးချီးပန်းလို့
တချို့တွေက အီကွေတာပေါ်မှာ အလေ့ကျပေါက်လို့
စကတ်ပါးပါးအောက်မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ စွဲမက်ချင်စရာကောင်းနေတုန်းပဲ
ငါဟာ မင်းကို အင်ဘီလစ်ကယ်ကြိုးတစ်ချောင်းဘဝကတည်းက ချစ်ခဲ့ရတာပါကွာ
မင်းဂျီစထရင်းက ငါ့ကို ၂၃ ၁/၂ ဒီဂရီ နှာတင်းစေတာတော့ဝန်ခံမိပါရဲ့
(တဆက်တည်း မင်းနောက်ကြောင်းရှင်းမှန်းလည်း ငါရိပ်စားမိခဲ့ပေါ့)
ဟာလာဟင်းလင်း ရေနံတွင်းကိစ္စ ခဏခေါက်ထားလိုက်ပါဦး
တစ်နေ့တာ မင်းလည်ပတ်သမျှနဲ့ တစ်ဘဝလုံးမင်းတိမ်းစောင်းပြသမျှ
မင်းဘာသာတရားနဲ့ မင်းဘာသာစကားကို ဘယ်သူမှ နားမလည်ကြဘူး
မင်းက ဥတစ်လုံး၊ တစ်ကောင်ကြက်ဆိုတော့
မင်း ဆိုင်ကလုန်းကို လေရော မိုးရော စုပ်သွင်းမျိုချချင်နေခဲ့တာငါပဲ
မင်းပတ်လမ်းကြောင်းထဲ ငါ့“လ”ဟာ တစ်စီးပြီးတစ်စီး ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်ခဲ့တော့
ဒီမှာ ငါ့ချော်ရည်တွေ ပွက်ပွက်ဆူထနေကြပေါ့။
၂ဝ၁ဝ မတ်လ ၂၉ရက်
အဲဒီနေ့တွေမှာ ငါ့ကိုယ်ငါ အသုံးမပြုဘူး
ငါ့ ခံစားချက်ကို အသုံးမပြုဘူး
ငါ့ ပညာရေးကို အသုံးမပြုဘူး
ငါ့ ယဉ်ကျေးမှုကို အသုံးမပြုဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သစ္စာ ဖောက်လိုက်ရတဲ့
အဲဒီ့ Mail အကောင့်ထဲမှာ
Email လိပ်စာကို မင်းမေ့နေလောက်ပါပြီ..။
ချေ လိုပဲ ကဗျာရွတ်တယ်…
မနှစ်က မတ်လမှာ ရေးတဲ့ကဗျာလေးပါ အခုလည်း ပြန်ကြိုက်လို့ ပြန်တင်လိုက်တာပါ..။
ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ သူမက သိသိနေတယ်
ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ ကျွန်တော်က ကြည့်ကြည့်နေမိတယ်
ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ သူမက ကျွန်တော်ကို ဘာကြောင့် သိသိနေတာလည်း
ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ ကျွန်တော်က သူမကို ကြည့်ကြည့်နေရတာလည်း
သူမက ကျွန်တော်ကို သိသိနေတယ် ..
ကျွန်တော် အရွှဲ့တိုက်တတ်တာက အစ ကျွန်တော် အသားမည်းတာအဆုံး
ကောင်မလေးတွေကို ချိန်းချိန်းပြီး မတွေ့ရဲတာကအစ
သူမက ဘာကြောင့်သိသိနေတာလည်းဆိုတာကို ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မသိရတာလည်း
သူမကို ကျွန်တော်က တစ်ချိန်လုံးလှမ်းကြည့်နေတာပဲ..
ပြီးတော့ ကျွန်တော်စိတ်တိုတတ်တာ ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်တတ်တာ
ပြီးတော့ ကျွန်တော် ကဗျာရေးတာ.. ပြီးတော့ ကျွန်တော် စီးကရက်ကြိုက်တာ
ပလက်ဖောင်းပေါ်ခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင် လမ်းလျှောက်နေတဲ့ လူတွေကိုငေး
ကျွန်တော်တွေးသမျှတွေကို သူမ ဘာကြောင့် သိသိနေတာလည်း
ကျွန်တော်ကတော့ အဆက်မပြတ်ကြည့်နေတာ.. သူမကို ဘာကြောင့်မသိတာလည်း
သူမကို ဘာကြောင့် မမြင်ရတာလည်း..
ကျွန်တော် အရိပ်လို သူမဟာ ကျွန်တော် အရိပ်မဟုတ်ခဲ့ပြန်ဘူး..ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်
အမှောင်ထဲကို သူမအကြောင်း သိမလားလို့..
ကျွန်တော်လည်း ဘာကြောင့်မှန်းမသိပဲ… သူမသိသိချင်လာတယ်..
မီးတောင်တစ်လုံး အကြွင်းသုည ဘ၀ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်
ရင်ဘတ်ထဲက potential တွေအရ
ခံစားမူမရှိတဲ့ မော်နီတာတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့
ငါ့ကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါး ရယ်မောလိုက်စမ်းပါ …..တေလေမလေး
အခု နှမြောတသ နှစ်ကာလတွေ
ပိုက်ဆံဆိုတာ မူးလို့ရှုစရာ မရှိဘူးမဟုတ်လား…!!!
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံး အပြည့်အ၀ လွှဲချော်ခွင့် ရှိနေတုန်း.. အဖြစ်အပျက်တွေကို ရေစုန် ရေဆန် ရှုမြင်ကြတာပဲ.. ဆုပ်ကိုင်ထားစရာ ကလည်း မှန်တယ်ထင်ရတဲ့ အကြောင်း ပြချက်ကိုယ်စီနဲ့… အချိန်မရွေး ရှုံးနိမ့်နာကျင်နိုင်တဲ့ ပေါက်ကွဲမှုတွေကြားမှာ … မရပ်မနားပြေးလွှားရင်း.. ငါတို့နှင်းဆီခင်းလေး ကျကျန်ခဲ့တယ်..။ လမ်းတွေဟာ ဆုံးစမရှိ ရတဲ့ အထဲ လက်ပြပြီးထားခဲ့ရတဲ့ အမှတ်အသားတွေ နည်းနည်းလေး တိမ်းစောင်းလိုက်ယုံနဲ့ လွဲချော် သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေ .. မသိနားမလည်ပဲ အမှတ်အသားတွေ ထားခဲ့တယ် အတိတ်
ငါတို့ ပြန်မရောက်နိုင်ကြတော့ဘူး.. .. ဒီလိုနဲ့ မှုန်ဝါးတဲ့ နေ့ရက်တွေလို ငါတို့ ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ အရေပြားတွေလည်း ဟောင်းနွမ်းညစ်ပါတ်ကုန်ပြီ ယုံကြည်မျော်လင့်ချက် တွေ ချေးအထပ် ထပ်တင်ကျန်လို့… ဆားငွေ့တွေ ရိုက်ခတ်လောင်ကျွမ်း သွားတဲ့ ရွက်လှေအိုကြီးလို ပင်လယ်ထဲမှာ ပင်လယ်ကို တစ်စခြင်း နစ်မြုတ်ခဲ့ရတယ်… အိပ်မက်တွေဟာ ရိတ်သိမ်းလွန်
ယာခင်းအို ထဲ ရင့်ရော်ကြွေလွင့် ပြီးတဲ့နောက် …
ငါတို့ အတွက် အနောက်တောင် မုန်သုန်လေတွေ အသစ်ပြန်လည် မတိုက်ခတ်တော့ပါ။
ပျင်းရိပျင်းတွဲ မနက်ခင်းတွေ အဖွင့် အရင်လို လင်းလက် နေတဲ့ အာရုံတွေဟာ ငါ့ကို ပိုမို သွေးဆူလွယ် စေတာကလွဲလို့… ဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးမှ မပံ့ပိုးနိုင်ဘူး…
ဒီထက်ပိုရှင်းပြလည်း ဒီထက်ပိုနားလည်နိုင် မယ့် အဓိပါယ်မျိုး မရှိပါ…။
ကြယ်စုတွေ ရဲ့ နာမည်ကို ငါမမှတ်မိတော့ဘူး ဒိုင်ယာရီကို ပြန်လှန်တော့
၂၈/ စနေနေ့ … ဆီထည့်မောင်းသည် … သုံးမိုင်ခွဲ
ဒီထက်ပို တွက်ချက်လည်း ဒီအဖြေပဲ ထွက်လာမှာ…
အစားအစာတွေ အားလုံး သိုဝှက်ထားခံရတဲ့အချိန် ဗုံးလည်းကြဲတယ် ဘီစကွတ်လည်း ကြဲတယ်….
အဲဒီ ကဘာကြီးနဲ့ တစ်စားပွဲတည်း ထိုင်ခဲ့ဖူးတာပဲ…
မျက်လုံးထောင့်စွန်းက တိမ်တွေ ရွေ့နေတယ်..
ဒီတောင်ကိုကျော်ရင်တော့ သူတို့လည်း ညှို့မှောင်ပြီး ပြုတ်ကျလာမှာ…
မနက်ကတည်းက မတွေးရသေးတဲ့ စာပိုဒ်ကို ထပ်တွေးတယ်
ကျမ်းစာဟာ ထင်ထားတာထက် သစ်လွင်တုံးပဲ..
အဓိပါယ်ဖော်မရတာတွေကို မနက်ဖြန်အထိ ခေါ်လာခဲ့တယ်
ဒီဂိမ်းက အသက်ရှင်နေတုန်း ကစားရင်ပျင်းစရာကြီး..
နောက်ဆုံးသောက်ခဲ့တဲ့ခွက်ထဲမှာ လက်ကျန်အရက်တွေ ပြန်ပြည့်နေတယ်
နောက်ဆုံး ထားခဲ့တဲ့ရက်မှာ လက်ကျန်ရက်တွေ ပြန်ပြည့်နေတယ်…
အခုတော့ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် အရင်လိုနေလို့ မကောင်းတော့ဘူး
မနက်ဖြန်ရောက်တော့ မနက်ဖြန်နဲ့အတူ သူနဲ့တူတဲ့တစ်ယောက် နိုးထလာဦးမယ်…
သူကတော့ အိပ်ခန်းထဲမှာ နေ့တစ်နေ့ကို အဆုံးစီရင်နေတာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်….။
ကျွန်တော့် အလွမ်းတွေက တကူးတကနဲ့
ကျဲကျဲတောက် နွေရာသီထဲမှာ (99)
Soft power ရနံ့ ကွန်ကရစ်ထုထည်ဆီတွေက
ကျွန်တော် အခု တစ်ဘ၀စာနွေရာသီရဲ့
ဘူးသီးဟင်းချိုသောက်နေရင်း ကုန်ခါနီးမှ ငါးလေးတစ်ကောင် ဇွန်းပေါ်မှာ ပါလာတယ်။
အံသြလို့မကုန်နိုင်အောင် ထိုငါးလေးက အသက်ရှင်နေတယ်။ ထပ်ကာအံသြဖို့မကုန်နိုင်အောင် သူ့စကားတွေက ထူးဆန်း တယ်။ တကယ်တော့ ငါးမျှားချိတ်က တီကောင်နဲ့ သဘာဝတီကောင်ကို မခွဲခြားနိုင်လောက်အောင် ပိန်းတဲ့ ငါးမျိုးသူတို့လော ကမှာ မရှိဘူးတဲ့။ သူရဲကောင်း ငါးတွေသာ ငါးမျှားချိတ်က အစာကိုဟပ်ရဲတယ်တဲ့။ သူရဲဘောကြောင်တဲ့ ငါးတွေကတော့ ရေနက်ထဲတိုးဝင်လို့ လူတွေမမြင်နိုင်အောင် ရွံနွံထဲမှာ ပုန်းကွယ်ကြတယ်။ ဟောဒီလို လူကြီးမင်းတို့ ဇွန်းပေါ်မှာ အလုံးအထည် မပျက်ရှိနေတဲ့ ငါးမျိုးကတော့ သူတို့လောကမှာ ရှားပါးပါတဲ့။ တကယ့်ကို သမိုင်းဝင်ငါးသူရဲကောင်းပါတဲ့။ မျိုးဆက်တိုင်း မျိုးဆက်တိုင်း တို့ရဲ့ငါးမျိုးတွေက သူ့ကို ဦးညွတ်နေလိမ့်မယ်တဲ့။ ငါးမျှားချိတ်ကြီး ရှိမုန်းသိသိနဲ့ တီကောင်ကြီးကို အားရပါးရ ဟပ်လိုက်လို့ အာခေါင်ကြီးပေါက်ပြီး သွေးတွေဖျန်းကနဲ ထွက်သွားပုံမျိုး ခင်ဗျားမြင်ယောင်ကြည့်စမ်းပါတဲ့။ ခံစားကြည့်စမ်းပါ။ လူသားတွေရဲ့ ကြောက်ရွံမှုတွေကိုတော့ သူတို့အံသြမိပါတယ်တဲ့။ သူများရဲ့အသားလည်း စားသေးတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အသားစလေး တစ်စလောက်ညှပ်ကျန်ခဲ့မှာစိုးရိမ်ပြီး တုတ်နဲ့ အတင်းရှာကလော်ထုတ်နေရတာမျိုးဟာ သူတို့အတွက်တွေးမိ လိုက်တိုင်း ဧရာမ ပြတ်လုံးကြီးပဲတဲ့။ သူတို့လိုပဲ အစားတစ်လုတ်အတွက် အာခေါင်ကြီးပေါက်ထွက်ရဲ့တဲ့ သတ္တိမျိုးရှိအောင် ကြိုးစားကြပါတဲ့။ အခုခင်ဗျားကျွန်တော့်ကို စားပြီးရင် အရိုးတွေ ထွေးထုတ်လိုက်ပါဦးဆိုပြီး ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ကျွန်တော့် ပါးစပ်ထဲ ခုန်ဝင်သွားတယ်။
အဲ့ဒီ့နေ့က သူခုန်ထွက်သွားတဲ့ ဇွန်းကိုမဆေးမိလိုက်ဘူး။
အီတလီ အနုပညာနဲ့ အဆောက်အဦးတွေမှာ
ရုရှားလုပ် ဗုံးဒဏ်ကြောင့် ဒဏ်ရာတွေနဲ့
အမ်16 လွယ်ထား အက်ရှနီကော့ ရိုင်ဖယ်ကိုလက်ကမချနဲ့
`ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကြိုးပမ်းချက်တွေဟာ အလကားပဲ´
ကျွန်တော့်သားကိုတော့ ပင်လယ်ထဲမှာပဲ ငါးမျှားခိုင်းထားပါတယ်
သူ့ငါးတွေ တစ်နေ့ နှစ်ဒေါ်လာလောက်ရတယ်
ဂျိုင်းထောက်က ပဋိပက္ခတွေက ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်
ကမ္ဘာကြီးက ဒီနေရာကို အဆိုးဆုံးအဖြစ်အပျက်တွေ
ပင်လယ်ဓားမြတွေ၊ ဂျီဟက်တွေ၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေ
အာဖရိက တစ်တိုက်လုံးကို မိုဂါဒစ်ရှုးက
အဲဒီစကားကို မိုဂါဒစ်ရှုးနဲ့ ပက်သက်လို့ အားလုံးရေရွှတ်ကြတယ်
ကမ္ဘာကြီးဟာ မိုဂါဒစ်ရှုးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပြန်ပေးဆွဲထားခဲ့တာကြာပြီပဲ...။
နောက်ဆုံးအချိန်ထိ မြန်မာသဘောင်္သား ၂၁ ယောက်ပါတဲ့ နော်ဝေသဘောင်္ကို ဆိုမာလီပင်လယ်ဓားမြတွေ ပြန်ပေးဆွဲခံထားရတယ်။
ကဗျာက ငါ့ထမင်းလုပ်ကို ပုတ်ချတယ်
ဘ၀က မ ဘက်လိုက်လွန်းတယ်
ကမ္ဘာပြင်ရမယ့် အရွယ် မဟုတ်ဘူး
(၄၊ ၁၀၊ ၂၀၀၆)
နှစ်ကိုက်စာလောက် ငါ့ကို မြေနေရာ
နေမ၀င်ခင် ထိတော့ လျှောက်မိသမျှ ကိုယ်ပိုင်မယ်
ဘာဆေးမှမတိုးတာကိုက ကုသိုလ်ထူးလိုလို ဘာလိုလို
မြူခိုးတွေ မဝေတော့ဘူး မကံ့ကော်..
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ရေးခဲ့သလို.. ခံစားချက်တွေဘေးဖယ်ပြီး လိုက်လျောညီထွေနေတတ်
ခဲ့ရမှုတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ပြန်လည် မမွေးဖွားပေးနိုင်တော့ဘူး မကံ့ကော်လည်း ဆောင်းနှောင်းတွေ
တစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ် ကျော်ခဲ့ပြီ.. ကလေးတွေလည်း ကြီးထွားလာကြပြီ
သစ်ပင်တွေလည်း မရှိကြတော့ဘူး.. မျော်လင့်ချက်က ရေကြည်မျက်နုရာအရှာထွက်.. အိပ်မက်တွေက ငယ်ငယ်က အိမ်ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ အသက်ရှုကျပ်နေတုန်း.. မကံ့ကော်
အိမ်မပြန်ဖြစ်တဲ့ သက္ကရ်ဇ်တွေထဲ မကံ့ကော်ကို အသေအချာလွမ်းရဲခဲ့ပါတယ်…။
ကမ္ဘာပျက်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ခဏခဏကြည့်ရတယ်…
ကမ္ဘာပျက်မယ့် စာသားတွေ ခဏခဏဖတ်ရတယ်…
မကံ့ကော် ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက် ကမ္ဘာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက ပျက်ပြီးပြီ.။
ဘ၀ဟာ ရယ်စရာပဲနော်… ကျွန်တော်တို့ မရယ်မောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး..။
မြူခိုးတွေ မဝေတော့ဘူး မကံ့ကော် လေတိုက်နှုန်းတွေလည်း ပိုပြင်းထန်တယ်…။
ကျွန်တော့် ရင်ခုန်သံနဲ့ ဟောဒီကမ္ဘာကြီးများ ချိတ်ဆက် ထားသလားလို့..
အရင်လိုတော့ မကံ့ကော်ကို လွမ်းနေတယ်..။
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ စကားထာများ
ကားဟွန်းသံတွေ အလဲလဲအကွဲကွဲနဲ့ 
မြို့ ပြရဲ့ အသည်းကွဲခြင်းဓလေ့က
ရေနွေးကရားလေး ငိုင်လို့ ၊
လမ်းတွေအုပ်စုဖွဲ့ ပျံနေကြတဲ့ နယ်မြေဟာ
ဓါတုဆိုးဆေးတွေနဲ့ပြုစားတယ်။
မြို့ ပြရဲ့ ပြူတင်းကို ကိုယ်စားပြုတယ်။
စိတ်ကောက်ရင် သိပ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်၊
ညနက်နက်ထဲ ပိတ်မိပြီး မမှောင်ရအောင်
အတိတ်နဲ့ လူနဲ့ လည်း မကွဲလှပါဘူး။
ဆန္ဒတွေ ရင်ကြားစေ့ဖို့ ကျွန်တော် ခရီးတွေထွက်ရလိမ့်မယ်
ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော် ကောင်းကောင်းသိတယ်....
ကမ္ဘာမြေကြီးကို ထမ်းပိုးထားတဲ့ တစ်နေ့မှာပဲ
အခုသား အမေ့ရှေ့မှာ လက်ပိုက်နေပြီ
at March 03, 2010 10 comments:
အရှုးအမှုး ထွန်ယက်ဖူးတဲ့ ကန္တာရတစ်ခင်းကို
ပန်းတိုင်ကို ပျပျလေး မြင်ရပြီးတဲ့နောက်
သခွေငျးရှငျခွငျးရဲ့ဝငျထှကျရာတံခါး နာကွငျမှုနဲ့ ကွငျနာမှုကွား ဆေးဝါးနဲ့ကုထုံးက အတိတျနဲ့အနာဂါတျကိုဆကျစပျပေးတယျ ရုပျနဲ့အရိပျ ကှဲထှကျသှားသူတှေ အ...